Ny mpitrandraka Cryptocurrency dia manakana ny fikarohana fiainana ivelan'ny tany | Vaovao momba ny gadget
Ny mpitrandraka Cryptocurrency dia manakana ny fikarohana fiainana ivelan'ny tany
Ignacio Sala | | Cryptocurrencies, About us
Nandritra ny taona 2017, afaka nanamarina izahay fa misy ny vola crypto, toy ny Bitcoin, Ether ary ny hafa, nampitombo be ny lanjan'izy ireo, hatramin'ny $ 19.000 mahery amin'ny tranga Bitcoin. Mba hahafahana mitrandraka vola crypto, mila fitaovana matanjaka tohanan'ny iray na maromaro GPU isika (satria mora kokoa ny mametraka GPU maromaro mifanitsy amin'ny processeur maromaro).
Ny fampifangaroana ny processeur (CPU) miaraka amin'ny sary (GPU) dia mahatonga ny fampisehoana ho avo kokoa noho izany, ambony kokoa ny vintana ahazoana kryptocurrency. Ity no antony lehibe indrindra amin'ny tsy fahampian'ny GPU matanjaka eny an-tsena sy ireo vitsy tonga, dia amin'ny vidiny mandrara no anaovany izany. Eto no ahitantsika ny olan'ny cryptocurrency sy ny vahiny.
Ny Search for ExtraTerrestrial Intelligence, fantatra kokoa amin'ny hoe SETi, dia mifantoka mitady fiainana ivelan'ny tany amin'ny alàlan'ny famakafakana ireo signal electromagnetic, fandefasana hafatra miandry olona hovaliana ary hamakafaka ireo sary voarain'ny teleskaopy lehibe izay niparitaka erak'izao tontolo izao. Na dia mandraka androany aza dia mbola tsy nahita famantarana izay manondro ny fisian'ny fiainana ivelan'ny tanindrazana manan-tsaina eny amin'ny habakabaka izy ireo, nefa tsy very fanantenana na dia teo aza ny fiezahana nandritra ny 40 taona mahery.
Saingy, hoy ny BBC, SETI dia te-hanitatra ny isan'ireo laboratoara iandraiketan'izy ireo hadihadio daholo ireo signal sy sary azony avy eny amin'ny habakabaka Ary noho izany dia mila ny GPU mahery indrindra eny an-tsena izy ireo, saingy noho ny fiakaran'ny vola crypto dia nanjary iraka tsy azo tanterahina ity asa ity. Mba hahafahana manodina ny angon-drakitra marobe voarainy dia mila hery be dia be izy ireo, hery izay azo raisina amin'ny fomba mitovy amin'ireo mpitrandraka cryptocurrency, araka ny efa nolazaiko tetsy ambony.
Ilaina ny ivontoerana fikarohana sasantsasany SETI, toy ny any Berkley mihoatra ny zato GPUs hahafahana manodina izany fampahalalana rehetra izany faran'izay haingana. Araka ny voalazan'ny Dr. Werthimer, Chief Investigator ao amin'ny foiben'ny SETI any Berkley
Ao amin'ny SETI dia te hahita fantsona matetika araka izay azo atao izahay satria tsy fantatsika hoe inona ny fahita matetika alefan'izy ireo ary mila mitady karazana famantarana rehetra izahay, na AM na FM.
Berkley dia nilaza fa manana ny vola izy ireo, saingy na eo aza ny fifandraisana mivantana amin'ireo mpanamboatraTsy afaka nitazona azy ireo izy ireo. Nvidia sy AMD dia nilaza fa miasa mafy izy ireo hamaly ny fitomboan'ny fangatahana GPU, fangatahana izay nanomboka naseho tamin'ny vola miditra amin'ireto mpanamboatra lehibe ireto, izay nilaza fa ny fiakaran'ny vola crypto dia mitondra vola kely tsy noeritreretin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Cryptocurrencies » Ny mpitrandraka Cryptocurrency dia manakana ny fikarohana fiainana ivelan'ny tany
Lahatsoratra mahaliana !!
Lalao Google Dinosaur
Google dia manala ny bokotra "zahao ny sary" amin'ny Google Images